.: Ko Moe's Electronics Notes :.: April 2008
Blog Posting လုပ်ခြင်းကို ခဏတာ ရပ်နားခြင်း
ကျွန်တော် ကမ္ဘာပေါ်မှာ www.Blogspot.com ကို Banned တဲ့ တစ်နိုင်ငံတည်းသော တိုင်းပြည်သို့ ၁၂. ၄. ၂၀၀၈ (စနေနေ့) မှစပြီး သွားတော့မှာ ဖြစ်လို့ Blog ကိစ္စများကို ခဏတာရပ်နားပါဦးမည်။
Posted by ကိုမိုး at Wednesday, April 09, 2008 No comments:
PIC Microcontroller Reference Books
ဒီစာအုပ်တွေက PIC Microcontroller နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး။ Hardware, Software, Configuration တွေအကြောင်း အကုန်ပါပါတယ်။ Assembly ရော၊ C language ရောနဲ့ပြထားတာတွေပါ။ မြန်မာဘာသာပြန်ပြီးထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်လည်း ပါမယ်ထင်တယ်။ PIC MCU အကြောင်းအပြည့်အစုံ ပါပါတယ်။ 8 bit MCU ရော၊ 16 bit MCU ရောအတွက် ရေးထားတာတွေပါ။
PIC 8051 Microcontrollers
Embedded C tutorial 8051
စာအုပ်တွေကို ဝေမျှတဲ့သူက “မောင်သန့်” ပါ။
Posted by ကိုမိုး at Wednesday, April 09, 2008 1 comment:
Labels: Books, Hardware, Programming, Project, Software
Parallel Port Complete Reference လိုပဲ Serial Port နဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေအကုန် ပါပါတယ်။ Hardware, Software, Interfaces တွေအားလုံးနဲ့ပါတ်သတ်တာတွေ ပါပါတယ်။ Parallel နဲ့ Serial port က Computer Controlled Automation ပိုင်းတွေမှာ အဓိကသုံးတဲ့အတွက် Computer field ရော Electronic filed အတွက်ပါ အသုံးဝင်ပါတယ်။ C, VC++, VC#, VB စတဲ့ programming languages တွေနဲ့ရေးထားတဲ့ ဥပမာလေးတွေ (program routines) ပါပါ တယ်။
ဒီစာအုပ်ကို ပေးတဲ့ မောင် zym ကိုကျေးဇူးတင်ကြပါ။
Posted by ကိုမိုး at Monday, April 07, 2008 No comments:
Labels: Books, RS232, USB
135 for Dummies E-Books (1 to 30)
Wiley Publishing Dummies စာအုပ်တွေပါ။ Computer related ဘာသာရပ်တွေ အများကြီးပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့စာအုပ်ကိုသာ ယူပြီးဖတ်ကြပေတော့ဗျာ။ တစ်ဖြည်းဖြည်းတင်သွားမှာဖြစ်လို့ လိုအပ်တာရှိရင် Cbox ကနေမှာခဲ့ပါ။
ဒီမှာ - Dummies စာအုပ်စာရင်း ကြည့်ပါ။
1. A+ Certification for Dummies 2nd Edition
2. Access Forms & Reports for Dummies
3. Act! 2005 for Dummies
4. Adobe Acrobat6PDF for Dummies
5. Adobe Creative Suite2All-in-One Desk Reference for Dummies
6. Adobe Premiere Elements for Dummies
7. Ajax for Dummies
8. ASP.NET 2.0 Everyday Apps for Dummies
9. Auto Repairs for Dummies
10. AutoCAD 2005 for Dummies
11. Beginning Programming for Dummies 3rd Edition
12. Beginning Programming with Java for Dummies
13. BlackBerry for Dummies
14. Blocking Spam & Spyware for Dummies
15. Blogging for Dummies
16. BuildingaWeb Site for Dummies
17. Building Research Tools with Google for Dummies
18. Building Your Business with Google for Dummies
19. BuyingaComputer for Dummies 2004 Edition
20. BuyingaComputer for Dummies 2005 Edition
21. BuyingaComputer for Dummies 2006 Edition
22. Buzz Marketing with Blogs for Dummies
23. C for Dummies 2nd Edition
24. C# 2005 for Dummies
25. C++ for Dummies 5th Edition
26. C++ Timesaving Techniques for Dummies
27. Camera Raw with Photoshop for Dummies
28. Car Hacks and Mods for Dummies
29. Cleaning Windows XP for Dummies
30. Creating Family Web Sites for Dummies
“နောက်ထပ် 500+ Programming E-Books တွေကို Download လုပ်နေပါပြီ။ နဲနဲတော့ ကြာမယ်ထင်တယ်။ Download ပြီးသွားရင် အကုန်တင်ပေးပါ့မယ်။”
Connect PC-to-PC with COM (Serial) port
Serial port ကို အသုံးပြုပြီး ကွန်ပျူတာအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်တဲ့ပုံပါ။ စာသား (Text) တွေပဲ PC အချင်းချင်း ဆက်သွယ်လို့ရမှာပါ။ Hyperterminal ဒါမှမဟုတ် COM port program တွေကနေဆက်သွယ်ပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။
Posted by ကိုမိုး at Friday, April 04, 2008 No comments:
Parallel Port Complete (Programming, Interfacing, PC parallel port)
ဟူး …. ဒီစာအုပ်ကို ရှာလိုက်ရတာဗျာ။ ခုမှတွေ့တယ် Parallel port နဲ့ပါတ်သတ်တာအစုံ Software ကော၊ Hardware ကော၊ Basics ကော အကုန်ပါတယ်။ ဖတ်သာကြည့်လိုက်ကြပေတော့။
Posted by ကိုမိုး at Friday, April 04, 2008 1 comment:
Labels: Books, Parallel Port
Parallel Port Monitor Program
ဒီ Software လေးက Parallel port ကို Monitor လုပ်တဲ့ Program လေးပါ။ port ရဲ့ ဘယ် bit မှာ Data (Low/ High) ရှိလဲဆိုတာကို ပြတာပါ။ Monitor program သက်သက်ပဲဖြစ်လို့ Hyper Terminal လိုတော့ Send/ Receive data လုပ်လို့မရဘူးပေါ့။
Download : Port Monitor
Posted by ကိုမိုး at Thursday, April 03, 2008 No comments:
Labels: Parallel Port, Software
Working with DLL (Dynamically Linked Library) files
.dll files တွေကို ကျွန်တော်အခုမှ သုံးဘူးတာဗျ။ တော်တော်ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်က ကိုယ်တိုင်တော့.dll file မတည်ဆောက်ပါဘူး။ လိုအပ်ရင် အင်တာနက်ကနေရှာပြီး သုံးလိုက်တာပါပဲ။ အခုပို့စ်က .dll file ကိုတကယ်လက်တွေ့တည်ဆောက်ပြီး သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ။ dll file တွေရဲ့အားသာချက်က ဘယ် Programming Language မှာမဆိုအသုံးတည့်တာပါပဲ။ သူ့မှာ က Input/ Output parameters သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိတော့ ဘယ် Language ကနေ ယူသုံးသုံး အတူတူပါပဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ Visual Basic ကနေသုံးတာပါ။
သူက Visual C++ ကနေ တည်ဆောက်ရတာပါ။ တည်ဆောက်တဲ့နည်းကတော့ အောက်က လင့်ခ်ထဲမှာရှိပါတယ်။
အောက်က လင့်ခ်တွေကတော့ လိုချင်တဲ့ .dll file ကို ရှာပြီး ဒေါင်းလုတ်တဲ့ လင့်ခ်ပါ။ သတိထားရမှာက Windows တွေမတူရင် အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
Parallel Port (LPT) Vs Serial Port (RS232)
Ports သဘောတရားက ရှင်းပါတယ် Parallel port က Parallel data transmission လုပ်ပြီးတော့၊ Serial port က Serial data transmissionလုပ်တာပါပဲ။ RS232 ကအလွန်ရှင်းပါတယ် TX (transmit), RX (receive) channels နဲ့ Signal Ground မှန်ရင် ရပါတယ်။ Parallel port (LPT) က တော့ 8 bit တစ်ပြိုင်နက်ပို့လို့ရတော့ channel များများကို ထိန်းနိုင်တာပေါ့။ သူ့ရဲ့ Hexa တန်ဖိုးတွေကို တွက်တဲ့နေရာမှာ တစ်ခုသတိထားပါ သူ့ရဲ့MSB (Most Significant Bit) က ရှေ့ဆုံးက စပါတယ်။ ဥပမာ - 1000 0000 = 1, 0100 0000 =2အဲလိုတွေသွားပါတယ်။ ၂ခုလုံးက dc 3.3 V ကိုသုံးပါတယ်။ ကျွန်တော် inpout.dll ဖိုင်ရဲ့ မူရင်း VC++ program ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Windows versions သုံးတဲ့ ပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ VC++ program နဲ့ dll ဖိုင်အရင်ထုတ်။ System32 folder ထဲကိုကူးထဲ့ပြီးမှ Program ကို run ပါ။
Download : VC++ program inpout32.dll
Parallel data transmission (Click on Image)
Serial data Transmission (Click on Image)
တစ်ခုသတိပြုရမှာက DB-25 (LTP port) က 25 pin ရှိပြီးတော့ Centronics Header က 36 pin ရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ အောက်က ဇယားမှာ သူတို့နှစ်ခုရဲ့ ဆက်သွယ်ပုံတွေပါပါတယ်။
Posted by ကိုမိုး at Wednesday, April 02, 2008 No comments:
Labels: Hardware, Parallel Port, RS232
Controlling Parallel port with Visual Basic
Visual Basic နဲ့ Parallel Port (LPT, Printer) ကို Control (Read, Write) လုပ်တဲ့ ပရိုဂရမ်လေးပါ။ မေ့သွားမှာစိုးလို့ တင်ထားတာ။ သူ့မှာ VB Control Icon (.OCX) မရှိပါဘူး။ inpout32.dll file တစ်ခုတော့လိုပါတယ်။ အဲဒါက သပ်သပ်ရှာပြီး Windows – System32 folder ထဲကိုထည့်ပေးရပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီမှာ www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?inpout32 ဒေါင်းလုပ်ရင်ရပါတယ်။ သူ့ကို System32 folder ထဲထည့်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်အောက်က Source code တွေကို ကူးထည့်လိုက်ပါ။ Screen Design ကိုတော့ အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေါ့။ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ အချိန်တွေတွက်ထားတာက အပိုတွေပါ။ ဖြုတ်ပစ်လို့ရတယ်။
ဒါက Form Code မှာကူးထဲ့
PortAddress = Val(&H37F)
Out PortAddress, Val(Text1.Text)
Dim fre As Double
Dim ino As Integer
Dim GMTime As SYSTEMTIME
a = GMTime.wSecond + 0.001 * GMTime.wMilliseconds
PortAddress = Val(&H378)
ino = InValue(PortAddress + 1)
b = GMTime.wSecond + 0.001 * GMTime.wMilliseconds
speed = 0.127 / (b - a)
Text1.Text = speed
ဒါက Module Code မှာကူးထဲ့
Public Declare Function InValue Lib "inpout32.dll" _
Public Declare Function SetSystemTime Lib "kernel32" (lpSystemTime As SYSTEMTIME) As Long
အဲဒီမှာပါတဲ့ (&H378) က Parallel port ရဲ့ Address ပါ။ သူက 8 Channels ရှိပါတယ်။ အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ။ 0x378 ကနေ 0x37F ဆိုတော့ I/O ၈ လိုင်းကို ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့သဘောပေါ့။
Posted by ကိုမိုး at Tuesday, April 01, 2008 No comments:
Labels: Parallel Port, Programming, Software
Parallel Port Complete (Programming, Interfacing, ...
Working with DLL (Dynamically Linked Library) file...